Amazon ukudansela isiginci sakhe hoverboards phezu ukwesaba nokuphepha - Izindaba Rule
Amazon ukudansela isiginci sakhe hoverboards phezu ukwesaba nokuphepha
Lesi sihloko osesikhundleni “Amazon ukudansela isiginci sakhe hoverboards phezu ukwesaba nokuphepha” lalotshwa Alex Hern, ngoba theguardian.com ngoMsombuluko 14th December 2015 09.07 UTC
Amazon uqalile ukudonsa ezinye hoverboards kusukela ukudayiswa emva okwesabayo ngokufa imililo okubangelwa Scooters self-kulinganisa.
Manje abaningana ababephothule hoverboards ukuthi kwase kuthengiswe on Amazon yanyamalala, okubala zonke izinhlobo ezinhlanu once sibuyekezwe ngumvikeli izindaba site BestReviews. Lokho site manje uxwayisa ababezokwakha abathengi ukuthi "okwamanje, Asibona ezincoma iyiphi hoverboards aze kungase kutholakale ukuthi uphephile ".
Ngokusho kwenye hoverboard umdayisi, Swagway, umdayisi online okufunile abakhiqizi ukuhlinzekela amadokhumenti okufakazela ukuthi izimoto zabo "imithetho nezindinganiso ze esebenzayo ukuphepha", ngokugxila ikakhulukazi ibhethri kanye namashaja for the amayunithi.
Like Christmas odlule 'Kumelwe-babe isipho electronic, selfie izinti, hoverboards kakhulu ekhiqizwa ngobuningi e China ngaphambi kokuba uthenge ngobuningi by nabadayisi zisebenza retouching yezimonyo nomkhiqizo. Ngokungafani selfie izinti, Nokho, hoverboards aqukethe amabhethri enkulu, okungaba yingozi ezinkulu uma they misfire.
Evikini eledlule, a hoverboard amabhomu enxanxatheleni yezitolo e Washington wombuso, ukuthumela abathengi ku ukwethuka. Nakuba kungekho muntu yokulinyazwa, kugqamuke amalangabi waba sematheni emhlabeni wonke.
Ekuqaleni kuka-December, amazinga Ukuhweba igunya yaseBrithani waxwayisa abathengi ukuba baxwaye, futhi wembula ukuthi 88% we hoverboards amazwe kusuka ngaphandle EU, sathi kwakudumé ihlolwe, wayehlulekile eziyisisekelo amasheke ukuphepha.
Ngaleso sikhathi, Leon Livermore, esiphezulu Chartered Trading Standards Institute, wathi: "Izigebengu abakhiqizi kokunganaki ngokuvamile ukuxhaphaza baningi futhi azame ukunqwabelana emakethe nemikhiqizo ezishibhile futhi iyingozi. Eminye imikhiqizo eyenziwe phesheya, ngokuyinhloko emakethe kwezilwandle, kungukuthi esuke ifakwe ipulaki lesifanele kanye fuse for ukusetshenziswa in the UK. Njengomuntu ubuncane, abathengi kufanele uhlole ukuthi plug ezintathu-pin kudivayisi States wenziwa BS1363. Uma ayihlanganisi lolu lwazi, ke musa ukuthenga umkhiqizo. "
Abathengi kufanele uqiniseke bona baqonde semthethweni usebenzisa hoverboard, esingenakubalwa ngokomthetho ukuba emaphutsa phezu kwendawo egandaywe ngamatshe noma endleleni in the UK.
Naphezu igama, hoverboards empeleni Roll ngaphesheya phansi amasondo.
34506	0 David Cameron, Europe, iyuniyani yase-Europe, France, isiFulentshi, Getty Images, Philip Hammond, Syria, The Guardian, i-United Kingdom
← Kanjani lokho ukugqoka kuyawulimaza umoya wethu The 25 imidlalo best of 2015: 25-21 →